NISA oo sheegtay iney gacanta ku soo dhigtay xubno al-Shabaab ah iyo qalab milatari - Halbeeg News
MUQDISHO(HALBEEG)-Taliska ciidamada Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka ayaa sheegay in howlgallo ay 1-dii bishaan ka fuliyeen xarun al-shabaab ay ku leeyihiin deegaanka Caanoole ee gobolka Shabeellaha-hoose lagu soo qabtay xubno ka tirsan al-Shabaab, walxaha qarxa iyo saanad malatari.
“Howlgal qorsheysan oo ciidanka amnigu xalay ka fuliyay Xafiiska Xisbada a-al-Shabab ee Sabiid Caanoole, ayaa lagu soo qabtay labo xubnood oo al-Shabaab ah, walxaha qarxa iyo saanad” ayaa lagu yiri qoraal lasoo dhigay barta Twitterka ee NISA.
NISA maa aaney shaacin magacyada iyo darajada xubnaha al-Shabaab ee ay howlgalka ku soo qabteen.
Taliska NISA ayaa tilmaamay in ciidamada ammaanka ay markasta u taaganyihiin ka hortaga al-shabab iyo badbaadinta shacabka.
Ciidamada Nabadsugidda iyo Sirdoonka Qaranka ayaa howlgallo lagu soo qabtay xubno ka tirsanaa al-Shabaab iyo Daacish fuliyay xilliyo kala duwan, hayeeshee intabadan warbaahinta uma soo bandhigaan xubnaha ay soo qabtaan.
Ciidamo boolis ah oo tababar loogu soo xiray dalka Jabuuti